အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၄
အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၄
Posted by we R one on Jan 25, 2012 in Creative Writing, Local Guides, Photography, Travel |4comments
ညနေ ၄ နာ၇ီ ကားပေါ်ကို အေ၇ာက် ပြန်ခေါ်ထားပေမဲ့ တစ်နာ၇ီခွဲ အချိန်အတွင်း မောမောနဲ အိပ်ပျော်သူ က အိပ်ပျော်နဲ မို့ ၄ နာ၇ီကျော်မှာ ကားစထွက်ဖြစ်ပါတယ်..။ ရာသီဥတု က နေမထွက်ပဲ အေးစိမ့်နေတာမို့ အနွေးထည် ကိုယ်စီနဲ ဖလန်းလန်း ထ ၇င်း ဘောစီ တို့ တည်းခိုး ၇ာ ဟိုတယ်ကို သွားခေါ်ပြီး ပုဂံမှ ထုထည် အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ ဓမ္မရံ ကြီး. ဘု၇ားဆီသို့ ခ၇ီဆက်ခဲ့ကြပါတယ်..။
ဓမ္မရံ ကြီး.ဘုရားကို အလောင်းစည်သူမင်းရဲ့ သားတော် အငယ် ဖြစ်တဲ့ ပုဂံသမိုင်းမှာ ဒေါသကြီးသော အဖသတ်မင်း အဖြစ်နာမည် ဆိုးနဲ ကျော်ကြားတဲ့ နရသူမင်း ခေါ် ကုလာကျ မင်းက တည်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.. ။ နရသူမင်းဟာ ခမည်းတော် အလောင်းစည်သူ မင်းကို ရွှေဂူကြီး ဘု၇ား အတွင်းသို့ ခေါ်သွင်းကာ ခေါင်းအုံးနဲ ဖိသတ်ခဲ့ပါတယ်..။ဒါ့ အပြင့် ဖခင်ပြီး၇င် ထီးနန်းတက်မယ် အစ်ကို ဖြစ်သူ မင်း၇ှင်စော ကို ဘိသိတ်သွန်းမင်္ဂလာ တင်မြှေက့်ပြီး ည မှာပဲ အဆိပ်ခတ်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး ပုဂံထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်.။
နရသူမင်းဟာ ဖခင်နဲ အစ်ကို ဖြစ်သူ ကို သတ်မိတဲ့ အတွက် နောင်တ၇ပြီ. ဖခင်နဲ အစ်ကို အတွက် ၇ည်စူးပြီး ဓမ္မရံ ကြီး ဘုရားကို တည်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.။ ဓမ္မရံ ကြီး ကို ၃ နှစ်အတွင် အပြီးတည်ဆောက်၇န်၇ည်၇ွယ်ထားခဲ့ ပြီး အုတ်တစ်ချပ်နဲ တစ်ချပ်ကြား ကို အပ်ထိုးလို့ မပေါက်အောင် တည်ထားခဲ့ပါတယ်.။ တည်ထားနေစဉ်အတွင်း အုတ်တစ်ချပ်နဲ တစ်ချပ်ကြား အပ်ထိုးလို့ ပေါက်ခဲ့မယ် ဆို၇င် ပထမဆုံး သတိပေးတဲ့အနေနဲ ပန်၇ံဆ၇ာ ကို လက်ချောင်းတွေ ကို ဖြတ်ပြီး အဝါကတ်ပြ ပါတယ်.. ။ နောက်တစ်ကြိမ် အပ်ထိုးလို့ ၇ခဲ့မယ် ဆို၇င်တော့ အဲဒီပန်၇ံဆ၇ာ ကို နှစ်ဝါတစ်နီနဲ သတ်ပစ်ပါတယ်..။ ၇က်စက်ချက်..
နရသူမင်းဟာ ၃ နှစ်နဲ အပြီးတည်ဆောက်၇န် ၇ည်၇ွယ်ထားပေမဲ့ ကုလားတွေ၇ဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံ၇ပြီး ဘုရားတည်ဆောက်မပြီးခင် တစ်နှစ် အလိုမှာ နတ်၇ွာစံသွားလို့ ဘု၇ားတည်ဆောက်ကြတဲ့ အလုပ်သမား ပန်၇ံဆ၇ာတွေ ကို ဘု၇ားကို ဆက်လက် မတည်ဆောက်တော့ပဲ နဲ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားခဲ့လို့ ဓမ္မရံ ကြီး ဘု၇ားဟာ အီဂျစ်က ပိ၇မစ် ပုံစံနဲ တူနေပါတယ် လို့ Guide က ပြောပါတယ်.။ဓမ္မရံ ကြီး ဘု၇ားကို အာနန္ဒာဘု၇ား ပုံစံ ပန္နက် တည်ဆောက်ပုံအတိုင်းယူခဲ့တယ်လို့ သိ၇ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ အာနန္ဒာဘု၇ား အောက်ခြေလို နက်နက်တူးထားမဟုတ်ပဲ ၄ ပေကျော်ကျော်သာ ၇ှိတယ်လို့ သိ၇ပါတယ်.။ ဥာဏ်တော် အမြင့် ပေ ၁ဝဝ ကျော်မြင့်ပြီး ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ဓမ္မရံ ကြီးဘု၇ား အဆောက်အအုံမျိုးလို ဒီနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၇ှိရဲလား ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပါ.။ သံမပါပဲ အုတ်များနှင့်သာ စီးထားခဲ့တာ ၊ အုတ်တစ်ချပ်နဲ တစ်ချပ်ကြား အပ်ထိုးလို့အ၇အောင် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ရှေ့ မြန်မာ ဗိသုကာ လက်၇ာက တော့ တကယ့်ကို အံသြစ၇ာပါပဲ.။ ဖောင်ဒေ၇ှင်း ၄ ပေကျော်သာ၇ှိပေမဲ့ ငလျှင်ဒဏ် အကြီးအကျယ်ခံရတာတောင် ပြိုကျပျက်စီးခြင်းမ၇ှိဘူး လို့ သိ၇ပါတယ်.။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ကြားလိုက်၇တဲ့ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းက ၈ ထပ်တိုက် အဆေက်အဦး ဆောက်တာ ၄ နှစ်ကျော်ပဲ ၇ှိသေးတယ် မြေကျွံပြီးပြိုကျလို့ နေထိုင်တဲ့ လူတွေ ကို ညတွင်းချင်းဘေးလွတ်၇ာကို ရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်၇တာ ဖတ်လိုက်၇တယ်.။ လွန်းခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉ဝဝ လောက်က အောက်ခြေ ၄ ပေကျော်သာ ၇ှိတဲ့ အဆောက်အဦး တစ်ခုနဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကျော်က မှ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦး၇ဲ့ အ၇ည်အသွေးက ကွာပါ့..။ အခြား အဆောက်အဦးမပြောနဲ အင်ဂျင်နီယာတွေ သင်တဲ့ GTC ကျောင်းတောင်ပြိုကျပါတယ်ဆိုမှ…:P
တစ်ခု စဉ်စားမိတာ က ဒီလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ေ၇ှ့မြန်မာ များရဲ့ ဗိသုကာ လက်၇ာတွေ က ဘယ်ေ၇ာက်ကုန် ပြီးဆိုတာပဲ.. လက်ဆင့်ပဲ မကမ်းခဲ့လို့ လား မသိဘူး ။ေ၇ှ့မြန်မာ များရဲ့ ဗိသုကာ အတတ်ပညာ တွေ တိမ်ကော ပျောက်ကွယ်ကုန်တာ တော့ တကယ် နှမျောစ၇ာပါ. ဒီနေ့ခေတ်မှာ နည်းပညာတွေ အမျိုးမျိုး တိုးတက်ပြောင်လဲလာပေမဲ့ေ၇ှ့မြန်မာ များရဲ့ ဗိသုကာလက်၇ာတွေကိုတော့ မမှီသေးဘူးလို့တင်တယ်…။
ဘု၇ားလည်းဖူး လိပ်ဥလည်း တူးခဲ့ ကြပြီမို့ စူဠမဏီစေတီ တော်သို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြလေတော့သည်.။
ထုထည် အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ ဓမ္မရံ ကြီး. ဘု၇ား
အဝေးက လှမ်းမြင်၇တဲ့ ဓမ္မရံ ကြီးဘုရား
အမှတ်တရ ပုဂံပြည်မှာ ပိုပြီးအမှတ်ရစရာ ရင်ခုန်စရာလေးတွေကော ထဲ့မရေးဘူးလား ဟင်..။ ဟီဟိ
x စတာနော x
ဘဒူရဲကွ၊ နာတို့အကြောင်း ရေးခိုင်းတာ။ ပရိုက်ဗိတ်ဆီလေကွာ…။ ဘယ်လိုကောင်လဲ သိဘူး၊ ဒင်းတို့ရှိလို့ နာတို့မှာ ထီးကွယ်ရ မိုးကာခြုံရနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကို ရှိဘူး…
ပျက်စီးခဲ့ရ၊ တို့ရဲ့ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော်။
we R one ရေ အခုမှဘဲ အပိုင်း ၁ ကနေ ၄ အထိဆက်တိုက်ဖတ်လိုက်ရတယ်